Cabdullahi Ciil-mooge xirsi oo gudoomiyayaasha gobalka Banaadir qaarkood ku qarxiyay sheegayna in ay la shaqeeyaan fidna wadayaasha. | warsugansomaliya.wordpress.com
Cabdullahi Ciil-mooge xirsi oo gudoomiyayaasha gobalka Banaadir qaarkood ku qarxiyay sheegayna in ay la shaqeeyaan fidna wadayaasha.
Wasiirka War-faafinta Soomaaliya, Cabdullahi Ciil-mooge xirsi, ayaa waxa uu shaaciyay in ay jiraan qorshooyin lagu bedelayo qaar kamid ah gudoomiyayaasha degmooyinka gobalka Banaadir kadib markii ay soo baxeen sida uu sheegay xoga muujinaya in ay fowdada qeyb ka yihiin.
“Ooda sida ay ukala sareyso ayaa loo kala qaadaa. Eeriyadu isku mid maaha. Maxaa wadajir, Hodon, xamar Weyne iyo Yaakhshiid kalaa duway? Masuuliyiinta laftigooda meesha jooga waa kamid. Xaafaduhu waa is-taqaanaan degma kasta waxa ay leedahay saldhig Police. Dowladu waa joogtaa saldhig waliba. Xaafad kasto oo xaafad ku soo biira waa layqaan. Isbedel ayaa magalada kusoo socda”, Wasiirka ayaa ka dhawaajiyay.
Wasiirka oo aan afka si cad ugu dhufan gudoomiyayaasha degmooyinka ee fidna wadayaasha ah ayaa hadana waxaa afarta degmo ee uu sheegay in ay kala duwanyihiin dhanka amaanka sedax kamid ah ay kamid yihiin degmooyinka sida aadka ah dadka loogu dilo halka mida kalana ay tahay mid amaankeedu uu aad u sareeyo arintaas oo laga dheehan karo in uu si siyaasadeysan uu weerar ugu ahaa gudoomiyayaal gaar ah.
Lama oga sida ay u dhacday in hadii xil ka qaadis lagu sameynayo gudoomiyayaal degmo horay looga sii shaaciyo war-baahinta iyada oo mararkii hore ay dhici jirtay in la arko wareegto xil ka qadistaasi lagu muujinayo iyo sidoo kale wareegto lagu magacaabayo masuulkii bedeli lahaa.
Si kastaba, waxaa laga war-sugayaa sida ay dowladu u fuliso hadalka uu ka dhawaajiyay wasiirka war-faafinta ee ah in xil ka qaadis lagu sameyn doono gudoomiyayaal qeyb ka ah fidnada baahday ee gobalka Banaadir ka jirta.
← Mid kamid ah idaacadaha Muqdisho oo baahisay in la xirayo xarunteeda shaqaalaheedana xabsi la dhigayo
Cali Maxamed Geedi oo ka hadlay sida uu ku dhacay waresyi uu ku fashilmay oo uu siiyay Idaacada Al-Fuqaan. →